Ahoana ny fametrahana LibreOffice 6.1 amin'ny Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana LibreOffice 6.1 amin'ny Ubuntu 18.04
Amin'ny ora farany Navoaka ny kinova vaovao an'ny LibreOffice, LibreOffice 6.1. Dika iray izay mampiditra fanovana lehibe eo amin'ny sehatry ny birao, na dia teo aza ny famoahana ny andiany 6 tamin'ity suite ity tsy ela akory izay. LibreOffice 6.1 dia manolotra ny fanovana saika ny programa rehetra mandrafitra ny efitrano misy ny birao ary namorona fanaingoana ho an'ny tontolo Windows aza.
Libreoffice 6.1 dia manolotra ny fanangonana kisary CoLibre ho an'ny tontolo Windows, fitambarana sary masina tsy mitovy amin'ilay tonga ho an'ny Ubuntu fa zava-dehibe raha irintsika ny mpampiasa Windows hanomboka hampiasa Free Software fa tsy Private Software.Ao amin'ny LibreOffice 6.1 Mpanoratra ny fanatsarana ny paging ho an'ny endrika Epub ary koa ny fanondranana dia nohatsaraina. Ny famakiana ireo rakitra .xls dia nihatsara ihany koa tamin'ity kinova ity ary LibreOffice 6.1 Base manova ny moterany lehibe ho maotera Firebird, izay mahatonga ny programa ho mahery vaika kokoa noho ny teo aloha, nefa tsy nanary ny fifandrindrany amin'ireo tahiry Access. Ny fampidirana amin'ireo birao tsy Gnome dia nohatsaraina ihany koa, izay mifanaraka kokoa amin'ny birao toa ny Plasma. Ny fanitsiana ny bibikely sy ny olana dia eo ihany koa amin'ity kinova LibreOffice ity. Ny sisa amin'ny fanovana sy fanitsiana dia hita ao ny naoty famoahana.
Raha te-hametraka LibreOffice 6.1 amin'ny Ubuntu izahay, tsy maintsy ataontsika amin'ny alàlan'ny par snap. Ity fonosana ity dia efa manana ity kinova ity ao amin'ny fantson'ny Kandidà, ka raha hametraka an'ity kinova ity dia mila manokatra ny terminal fotsiny isika ary manoratra izao manaraka izao:
Hanomboka ny fametrahana LibreOffice 6.1 io. Raha manao fametrahana kely indrindra an'ny Ubuntu isika ary manana LibreOffice 6 amin'ny alàlan'ny fonosana haingana, Ny tsara indrindra dia ny fanesorana ny LibreOffice aloha ary avy eo ataovy ny fametrahana LibreOffice 6.1 tokana. Mety ho mandreraka izany, saingy ny Ubuntu dia hiasa tsara kokoa noho ny manana kinova LibreOffice roa samihafa ary hitsitsy toerana ihany koa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fametrahana LibreOffice 6.1 amin'ny Ubuntu 18.04
Francisco Antonio Nocetti Anziani dia hoy izy:
Valiny tamin'i Francisco Antonio Nocetti Anziani
Ervin Varela Solís dia hoy izy:
Efa nametraka azy aho…?
Valiny tamin'i Ervin Varela Solis
Jordi Agusti dia hoy izy:
Napetraka ary miasa tanteraka (amin'ny Catalan).
Ny fametrahana azy amin'ny mailaka dia heveriko fa tsy hanavao izany amin'ny alàlan'ny Ubuntu Update Manager, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Jordi Agustí
ghosttuz dia hoy izy:
Efa nanandrana aho ary miasa toy ny hatsarana.
Amin'ny alàlan'ny famerenako zavatra izay nahagaga ahy be dia be, Guadalinex izao dia tarihin'ireo mpampiasa fa tsy ny Junta de Andalucía
Mamaly an'i ghosttuz
mario anaya dia hoy izy:
Miasa tanteraka izy io, ary efa ampidirina ao amin'ny magazay rindrambaiko Ubuntu.
Tsy mila manokatra ny terminal ianao raha te hametraka azy. Na dia tsy hitako aza ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny kinova vaovao sy ilay teo aloha. Fa olana hafa koa izany
Valiny tamin'i Mario Anaya
internetLan (@internetlan) dia hoy izy:
Miasa lavorary. Saingy azonao atao ve ny milaza amiko raha azo atao ny mametraka fiteny hafa amin'ny fomba mitovy ary manampy amin'ny alàlan'ny mailaka?
Valiny amin'ny InternetLan (@internetlan)
Hitako fa misy fiteny hafa ao amin'ny pejy Libreoffice, raha ny amiko dia tsy mandeha amin'ny fiteny Espaniôla amin'ny solosaina finday aho ary ny teny Anglisy amin'ny solosaina finday hafa.
Sintomy amin'ny alàlan'ny falehan-driaka ny fonosana (tsy tadidiko fa snap na deb) sy ilay fisie fisarahana amin'ny alàlan'ny torrent. Na dia efa nilavo lefona aza aho ary nametraka azy avy tao amin'ny afovoany malefaka Ubuntu
Jereo ny fikirakirana na ny safidinao, angamba manome safidy hafa anao io na azonao atao ny manova ny fiteny na mametraka iray hafa.
Salama tsara !!! taona tsara ho an'ny rehetra, zaraiko aminao, linux ny tsara indrindra amin'ireo rafitra fiasa telo, 1) mpizara ubuntu misy birao (safidinao) sy ireo rindranasa tianao indrindra, 2) OSX (Sierra na avo kokoa) rafitra fiasa tena tsara, haingana, milamina, ny console Mitovy amin'ny Linux izy io nefa somary sarotra kokoa, ary 3) haha, ireo varavarankely malalako, misy ny zava-drehetra fa ny tsy milamina indrindra. inona no mifanohitra amin'izay. miarahaba antsika rehetra. Mariano.
Damtrax Lopez dia hoy izy:
Napetraka ary miasa. Misaotra anao.
Mamaly an'i Damtrax Lopez
louis fernal dia hoy izy:
Tao amin'ny lubuntu 18.04 dia tsy mandeha ny baiko 'snap', nosoloiko "apt-get" ... ary nametraka ny zava-drehetra tao anatin'ny fotoana fohy, izay rehetra miakatra amin'ny DataBase izay voatery nesorina teo aloha.
Asa tsara vitan'izy ireo!
Valiny tamin'i Luis Fernal
Ao amin'ny Ubuntu 18.04 dia napetraka miaraka aminy ity fonosana ity:
sudo apt-mahazo mametraka maimaimpoana
Kitendry hitsin-dàlana izay hanampy antsika hamokatra bebe kokoa amin'ny Ubuntu 18.04
Atambaro mora foana ireo rakitra PDF miaraka amin'ireo programa samihafa ao amin'ny Ubuntu